Wed, Jul 8, 2020 at 8:20pm
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीमा अन्तरराष्ट्रिय डेमोक्रेटिक युनियन(आइडियु)को अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ । क्यानडाका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा आइडियुका अध्यक्ष स्टेफेन हार्परले सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभयो । सम्मेलनमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिइरहेको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा राप्रपाका सहायक महामन्त्री प्रेमकुमार श्रेष्ठ र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ तिवारी सहभागी हुनुहुन्छ । सम्मेलनमा प्रजातन्त्र, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र उदार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी..
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । नेपाली सेनाले कौडीको भाउमा विक्री गरेका हतियार किनेर एउटा अमेरिकी परिवार अर्बपति बनेको छ । अमेरिकी नागरिक क्रिस्ट्यिन र एलेक्स क्रान्मरको जीवनमा आधारित भएर नेशनल जोग्राफी च्यानलमा प्रशारण भैरहेको कार्यक्रम ‘फ्यामिली गन्स’मा यस्तो खुलासा भएको हो । १. बि.सं.१९२८ पुसमा भारतको कोलकत्तामा जन्मिएका ‘गेहेन्द्र शमशेर जबरा’ नेपाली शाहीसेनाका जर्नेल थिए । तत्कालीन राणाकालको तेश्रो प्रधानमन्त्री ‘महाराजा बीर शमशेर..
काठमाडौँ, १८ मङ्सिर भारतको नयाँ राजनीतिक नक्साविरुद्ध नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको तीन साता बितेको छ । तर भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन । बुधबार सीमा बचाऔं अभियानका प्रतिनिधिहरुसँग भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को भारतबाट कुनै जवाफ नआएको पुष्टि गरेका हुन् । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरे लगतै विरोध गरेको नेपालले मंसिर पहिलो साता कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।..
Results 9788: You are at page 57 of 327